स्वच्छ पशुपति अभियान २०७८, शुरु हुदैं
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार १०:०९
२९ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : पशुपतिनाथमा स्वच्छ पशुपति अभियान २०७८, शुरु हुने भएको छ । अभियान आगामी असोज २ गते शनिवार देखि शुरु हुन लागेको हो । हाम्रो आस्था, सम्पदा र संस्कृति सभ्य नागरिक स्वच्छ पशुपति नारा दिदैं स्वच्छ पशुपति अभियान २०७८, हुने भएको हो ।
डा. श्याम खड्काको संयोजकत्वमा शुरु हुने स्वच्छ पशुपति अभियानको शुरुवात वरिष्ठ कलाकार शिव श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा हुने संयोजक डा खड्काले बताए । उक्त दिन अन्य चर्चित कलाकारहरुको पनि उपस्थित रहने छ । कार्यक्रम हरेक शनिवार बिहान ८ वजे देखि १० वजेसम्म हुने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
श्री पशुपतिनाथलाई सफा र स्वच्छ राख्नु पनि धर्म हो । अब श्री पशुपतिनाथमा सरसफाई लगायत स्वच्छताका लागि विभिन्न स्थानहरुमा बृक्षारोपण अभियान पनि शुरु हुने कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापाले जनाए । अबको पशुपति हराभरा पशुपति हुने र एक भक्त एक बृक्ष नामक अभियान समेत शुरु हुने सदस्य सचिव डा. थापाले जनाए ।
पशुपति क्षेत्र परिसरमा रुद्राक्ष, श्रीखण्ड, बर पिपल, पारिजात, वेल तथा अन्य धार्मिक बृक्षको उद्यान बनाईने समेत उनले जनाए ।
‘कविर पथ धर्म’ लाई जनगणनामा समावेश गर्न माग
आज २०७८ भदौ ३१ गते बिहीबारको राशिफल
वेद विद्याश्रमलाई विश्वविद्यालय बनाउन पहल सुरु गर्छु : सदस्यसचिव डा. थापा